Balloon Fight, lalao Nintendo misavoana ao amin'ny App Store | Vaovao IPhone
Ny fahatongavan'i Nintendo kilasika amin'ny App Store dia zavatra izay efa niandrasan'ny maro amintsika izay nankafy ireo arcade ireo nandritra ny taona 90. Ireto kilasika amin'ny NES ireto dia zava-mahagaga kely mampiankin-doha tokoa fa na dia afaka nanandrana imbetsaka tamin'ny alàlan'ny emulator malaza aza izahay dia tsy nahavita nampifanaraka ny filalaovana horonan-tsarimihetsika video mihitsy satria tsy mifanaraka tsara amin'ny fanaraha-maso mikasika ny iPhone sy Pikantsary iPad. Na izany aza, toa niditra an-tsokosoko tao amin'ny App Store ny iray tamin'ireny arcade kilasika ireny nefa tsy nitabataba be: Balloon Fight. Miaraka amin'ny anarana mitovy sy miaraka amina endrika mitovy amin'ilay tany am-boalohany, ao anatin'izany ny feonkira, ity lalao ity dia mamerina fahatsiarovana lehibe ho antsika izay nandany ora maro nilalaovana azy taona vitsivitsy lasa izay.
Balloon Fight dia tsy avy amin'ny tanan'i Nintendo, araka ny azonao an-tsaina, fa manitrikitrika izahay fa tsy kopia mitovy amin'ny tany am-boalohany, dia voahaingo tanteraka aminy. Azonao atao ny manamarina azy amin'ny alàlan'ny horonantsary eo an-tampon'ny lahatsoratra, izay momba ilay tany am-boalohany avy amin'ny Nintendo, ary mampitaha azy amin'ilay azonao sintonina amin'ny iPhone sy iPad-nao. Tsy dia sarotra ny tetika: aringano ny fahavalonao amin'ny alàlan'ny fanenjehana ny balaonina alohan'ny handefasany ny anao ary hamoy ny ainao ianao. Kilalao tena tsotra nefa iray izay mampiankin-doha tokoa ary azo antoka fa ho tian'ny mpitia ny arcade kilasika indrindra.
Ny lalao dia misy ao amin'ny App Store, toy ny fampiharana Universal manan-kery ho an'ny iPhone, iPad ary iPod Touch. Ny fepetra takiana dia tsy mitaky be loatra, miaraka amin'ny iOS 5 ho hany fepetra takiana, ary koa maimaim-poana koa izany. Mandra-pahoviana no haharitra eo amin'ny App Store? Raha sanatria ka alefanao haingana araka izay azo atao dia andao mankany Nintendo hitaraina amin'i Apple ary esorintsika amin'ny kapoka penina. Fa momba izay ihany, misaotra an'i Nacho mpiara-miasa aminay avy amin'ny Actualidad iPhone izay nanome izany fampandrenesana izany taminay ny fisian'io fahagaga kely io.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao IPhone » iPad » Balloon Fight, lalao Nintendo misavoana ao amin'ny App Store
RHA MA750i, headphone premium ho an'ny iPhone-nao